China Bhodhoro rewaini vagadziri uye vanotengesa | Hongning
Zita Chinwiwa girazi Bhodhoro
Kukwanisa 250ml, 375ml, 500ml, 750 ml
Simbiso mhando sikuruu chivharo/ pvc cork
Kavha yemapuranga nhovo, imwe 40HQ: 21 pallets. imwe nhovo: zvidimbu 1575. kana mapepa atorwa
MOQ Zvidimbu 10000
Mharidzo Chipo Ehe
Semuenzaniso Kurongeka Kana yangosimbiswa, iwo masampuli anozotumirwa mukati memazuva manomwe.
Iyo joker inokwana 750 ml, waini tsvuku.
Iyo ine yakanaka, yakachena yekunze ine girazi reganda uye punk pasi
Isu capsule ine yakashongedzwa dhizaini, hapana inoonekwa tambo, uye tinoumba tamper-proof chisimbiso
Kapu nekutsvedza pahombodo uye kukanganisa kunogona kukurumidza kunama - chivharo chekuchengeta mweya kuomarara, inogona kunyorera uye kudzokorora kushandiswa pasina kurasikirwa nekubudirira
Kutengeswa kwezvigadzirwa zvedu kuchave kuri mumamiriro akanaka uye pasina hurema -
Uri kusaziva uchidya plastiki mazuva ese. Hezvino zvazvinoita kumuviri wako
Inochengetedza kugadzikana kwetembiricha yemvura
Kunyangwe kuri kutonhora kana kupisa, mabhodhoro egirazi anokwanisa kubatirira pane tembiricha yavo pamwero wehukama uye mukuita kudaro, zvakare simbisa kuti kune zero kutora mafirita kana mavara kubva mumudziyo wakataurwa.
Kurumidza kuchena uye hutsanana
Mabhodhoro emvura egirazi ari nyore mukugadzirisa kwavo uye haarasikirwe nekujeka kwavo paanogezwa kana kupinzwa nezvimwe zvinwiwa. Izvi hazvisizvo nemabhodhoro ePET.
Iwe unofanirwa kuve wakanzwa kunhuwidza kana kuravira kana uchinwa mvura kubva mubhodhoro rePET, nekuti kana yakashambidzwa kupisa nekunyorova, vanogona kuburitsa chepfu inokuvadza seBPA iyo inogona kutungamira kuzvirwere zvinokuvadza. Mabhodhoro egirazi haaburitse yakasviba kana kuravira kusinganzwisisike kana kunhuwidza uye hapana chiyero chemasara kana mvura ichidyiwa mumabhodhoro egirazi.
boka redu riri nyanzvi nokutengesa zvakasiyana mhando epurasitiki bhegi. kambani yedu inogamuchirwa nekambani yeSGS. isu chokwadi zvinhu nhumbi.
ini ndichakupa chitaurwa chedu chinonzwisisika zvinoenderana neyako yakadzama inodikanwa uye kuwanda kuwanda.Kana chero munhu achida kuitenga, ndokumbira undibvunze uye ini ndichadzokera kwauri nekukurumidza patinoenda online. Tine fekitori redu uye ndichaita shuwa kuti tinogona kukupa iwe yemakwikwi mutengo
Guta redu riri shandong yantai, yantai iguta regungwa, gamuchirai munhu wese ku yantai kufamba, ndine chokwadi chekuti ndinogona kuve gwara rakanaka kwazvo !!
Tinogona kunakirwa nezuva pamhenderekedzo yegungwa uye kunakidzwa nekupenya kwezuva.
Iwe unogona zvakare kuita musangano mune imwe nguva masikati, kuti uone kudoka kwezuva.
Ehezve, guta redu rine zvakare rakakurumbira waini uye hove dzegungwa, isu tinogona kutaura mune yegungwa kuona kamuri tichinakirwa nechikafu ！！！！
Ichi chinhu chakanaka kwazvo, handigoni kumirira kare!
Pashure: Bhodhoro rezvinwiwa uye mabhodhoro ezvinonhuwira
Zvadaro: Bhodhoro repurasitiki